बलिउड चलचित्र ‘खाली पीली’ डिशहोमको सिनेमाघरमा हेर्न सकिने – Our News Crew
बलिउड चलचित्र ‘खाली पीली’ डिशहोमको सिनेमाघरमा हेर्न सकिने
पालमै पहिलो पटक बलिउडको चलचित्र पे पर भ्यू मार्फत नेपाली टेलिभिजनमा हेर्न पाउने सुविधा डिशहोमले शुरुवात गरेको छ। शुक्रबार रिलिज हुने चलचित्र ‘खाली पीली’ पे पर भ्यू सुविधा मार्फत डिशहोमका ग्राहकहरुले हेर्न पाउनेछन्। ग्राहकहरुको मनोरञ्जन लाई ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्रहरु रिलिज गर्ने उदेश्यले डिशहोमले सिनेमाघर ईन्टरनेशनल ९९९ सञ्चालनमा ल्याएकोे हो।
विश्वको विभिन्न देशमा सफल भएको प्रविधि पे पर भ्यू सेवा नेपालमा नै पहिलो पटक डिशहोमले सञ्चालन गरिरहेको छ। डिशहोमले पे पर भ्यू सेवा मार्फत न्युनतम मूल्यमा परिवारसँग घरमा नै बसेर नयाँ नयाँ नेपाली सिनेमा हेर्न सकिने च्यानल नं. १०८ ,८८८ र ५५५ यस अघिनै सफलताका साथ सञ्चालन गरिरहेको छ।
दैनिक ८ शो सञ्चालन हुने सिनेमाघर इन्टरनेशनल च्यानल नं। ९९९ मा चलचित्र ‘खाली पीली’ हेर्न, आई।भि।आर नं. ९८०११९०९९० मा फोन गरेर दिएको साधारण निर्देशन अनुसार वा डिशहोमको ग्राहक सेवा केन्द्रको फोन नं। ०१४२१७६६६ मा फोन गरेर, टोल फ्रि नं. १६ ६० ०१ २२००० मा फोन गरेर अथवा एमओडी ९९९ आफ्नो केसआईडी अनि हेर्न चाहेको सो समय टाईप गरि साधारण एस एम एस पठाएर र नजिकैको डिशहोम विक्रेताकोमा सम्पर्क गरेर समेत न्युनतम शुल्कमा सिनेमाघर खुलाउन सकिन्छ।
रौतहटमा १४ वर्षकी बालिकाको बलात्कार पछी हत्या गरिएको आशंका
अमिताभको घर बाहिर प्रदर्शन, अक्सिजनको सिलिन्डर दिइयो
क्यान्सरसँग संघर्षरत बलिउड अभिनेता ऋषि कपुर अस्पताल भर्ना